Moto opal iri pachena kune inopenya opal dombo rinokosha - vhidhiyo
Tags moto, Moto opal, hiakindi
Moto opal zvinoreva. Isu tinogadzira zvishongo zvetsika nematombo akachekwa kana mbishi moto opal akaiswa semhete, mhete, chishongo, rundarira kana pendende.
Tenga opal yemusango muchitoro chedu
Moto opal iri pachena kune inopenya opal, ine inodziya muviri mavara yeyero kune orenji kune yakatsvuka. Kunyangwe zvisingawanzo kuratidza chero kutamba kwemavara, pano neapo ibwe rinoratidza kupenya kwakasvibira kwemavara. Sosi inonyanya kuzivikanwa idunhu reQuerétaro kuMexico, maopals aya anowanzo kunzi Mexico opal opal. Matombo mbishi asingaratidzi kutamba kwevaravara dzimwe nguva anonzi jelly opals. Mexican opals dzimwe nguva anochekwa mune yavo rhyolitic inomiririra zvinhu kana zvakaoma zvakakwana kubvumira kucheka uye kupora. Rudzi urwu rweopal yekuMexico runonzi seCantera opal. Zvakare, rudzi rweopal anobva kuMexico, unonzi meal opal yeMexico, opal isina ruvara inoratidzira bhuruu kana goridhe remukati sheen.
Girasol opal iri izwi dzimwe nguva zvisirizvo uye zvisirizvo rinoshandiswa kureva dombo remoto mbishi, pamwe nerudzi rwejekerere kune semitransparent mhando milky quartz kubva kuMadagascar iyo inoratidza asterism, kana nyeredzi mhedzisiro, kana ichekwa zvakanaka. Nekudaro, iyo yechokwadi girasol opal rudzi rwe hyalite opal iyo inoratidza kupenya kwebhuruu kana sheen iyo inoteera iyo sosi yechiedza yakatenderedza. Hausi mutambo wemuvara sezvinoonekwa mune yakakosha opal, asi asi mhedzisiro kubva kune microscopic inclusions. Iyo zvakare dzimwe nguva inonzi mvura opal, zvakare, kana ichibva kuMexico. Idzi nzvimbo mbiri dzinozivikanwa dzemhando iyi yeopal ndeyeOregon neMexico.
Perual opal inonziwo opal yebhuruu semi-opaque kune opaque bhuruu-girini bwe rinowanikwa muPeru, iro rinowanzo chekwa kuisa matrix mune mamwe opaque matombo. Iyo hairatidzi kutamba kwemavara. Bhuruu opal inouyawo kubva kuOregon mudunhu reOyyhee, pamwe nekuNevada kutenderedza Virgin Valley, USA
Dema moto opal
Iko hakuna hutema moto opal. Moto opal zvinoreva opal yakajeka asi ese matema opal akajeka izvo ndosaka isiri pfungwa. Vanhu vazhinji nevatengesi vezvigadzirwa (vasiri gemologists) vakavhiringidza mazita ematombo kana kupa zita risiri iro kumatombo. Ivo pamwe vanoedza kurondedzera dema opal nekutamba kwemavara zvinoitika kumusoro.
Moto opal zvinoreva
Iri ibwe rinokosha rine zvarinoreva uye zvivakwa zvekuburitsa hunhu hwemuridzi. Seizvo zita rinoratidza, iri dombo rinomiririra "murazvo" uye rine simba rakasimba kwazvo. Unogona kushandisa simba rako zvakanaka nekupisa simba rako. Izvo zvakanaka kushandisa kana iwe uchida kuona yako kurota kana chinangwa.
Moto opal kubva kuMexico
Moto opal pasi pe microscope
Chii chinonzi opal yemoto chakagadzirwa?
Yakagadzirwa mukudzika kwemakomo ekare, iro dombo rinogadzirwa kana mvura ichidonhera mumarara ane silika, ichizadza matanda ayo nemakomba. Pasi peichi chishamiso uye kumanikidza, mabota anoteya mvura mukati mawo, achigadzira aya mashiripiti, ekupenya kwezuva.
Moto opal inodhura here?
Ruvara rwakanyanya kukosha ndirwo rutsvuku. Orenji uye yero zvakatowanda uye zvakachipa, asi aya mavara achiri pakati peanonyanya kudhura achienzaniswa nemamwe opal mavara. Chero chero ruvara, rwakanyanya hue, rwakanyanya kukosha.
Rudzii rwedombo moto opal?
Mune sainzi yemamineralogy, dombo iri harisi remaminerari, asi amorphous mineraloid. Izvi zvinoreva kuti haina kana chimiro chekristalline seicho chechokwadi chicherwa. Kunge mamwe marudzi ese eopal, Iko kuunganidzwa kwetudiki silika mabhora.
Ndeupi musiyano uripo pakati pe opal nemoto opal?
Opal yakajeka. Moto opal mhete inogadzirwa neakajeka kune translucent opal, ine inodziya muviri mavara yeyero kune orenji kune yakatsvuka. Kunyangwe zvisingawanzo kuratidza chero kutamba kwemavara, pano neapo ibwe rinoratidza kupenya kwakasvibira kwemavara.
Ndiani anofanira kupfeka opal yemoto?
Munhu akazvarwa aine zodiac anoratidza Taurus & Libra anofanira kuipfeka. Inokurudzirwa kwazvo kune mumwe munhu, ane Mahadasha kana Antardasha weVenus Shukra mune iyo horoscope. Opal inobatsira kwazvo kune vanhu vanotambura nekushaya mbereko, kusagadzikana pabonde, Libido, uye kushaya simba.
Tenga opal yechisikigo muchitoro chedu
Isu tinogadzira zvishongo zvetsika nematombo akachekwa kana mbishi moto opal akaiswa semhete, mhete, chishongo, rundarira kana pendende.
Tags hiakindi, pingi, Pink opal
Tags Quarry, hiakindi
Tags dombo, Koroit, hiakindi
Tags Doublet, hiakindi